Zvishongo nezvishongo fekitori - China Zvishongo & Zvishongedzo vagadziri uye vanotengesa
Pretty Shiny Zvipo zvakabatanidzwa mune zvesimbi zvigadzirwa kubva muna 1984. Yedu Zvishongo uye Madumwa zvakarongedzwa senge mhete, mhete, zvuma, zvishongo, mhete, mazango, waini mazango, runhare mbozha, mabhureki. Iwe unogona kuongorora kwedu kunoshamisa kuunganidzwa kuti uwane kukurudzirwa wozoita hunhu hwekufananidzira dhizaini. Chidimbu chimwe nechimwe chaive chakapeteredzwa uye chakakwenenzverwa zvakanaka nehunhu hwakavimbiswa. Tumira meseji yako nenzira yaunoreva, isu tichagadzira mafuru kuti tivaise pamazango, tivimbe isu kuti chinhu chidiki chichaita yedu yakanaka yakanaka kupenya. Specifications: ● Kusungirirwa: tambo muzvinhu zvakasiyana, mhete, chishongo, cheni. ● Dhizaini: 2D kana 3D kana yakazara cubic, zvinhu, chimiro, saizi, mavara akagadziridzwa ● MOQ: 100pcs ● Kurongedza: polybag, velvet bhegi, chipo bhokisi, reganda bhokisi.
UV Kudhinda Metal Charms Keychains
Mhete Vabati / Mhete Vabati